उपत्यकामा किराना पसल दिनभर खुल्ने, अरु के कति बजेसम्म खुल्ने ? - Nepali in Australia
June 28, 2021 autherLeaveaComment on उपत्यकामा किराना पसल दिनभर खुल्ने, अरु के कति बजेसम्म खुल्ने ?
काठमाडौं । काठमाडौं उपत्यकाभित्र जारी निषेधाज्ञा खुकुलो भएको छ। यद्धपी एकसाताका लागि भने निषेधाज्ञा थपिएको छ । थपिएको निषेधाज्ञामा धेरे कुरा खुकुलो पारिएको छ । निश्चित घण्टा मात्र संचालन गर्न पाउने पसल निर्वाध खुल्ने भएका छन् ।
कपडा लगायतका पसल पनि संचालन हुने भएका छन् । यसअघि पसलहरुलाई वर्गीकरण गरेर तोकेको दिनमात्र खोल्न दिइएको थियो। अब भने सबै प्रकारका पसल सबै दिन खुल्नेछन्।
पसलहरुमा लगाइएको बार प्रणाली हटेको प्रमुख जिल्ला अधिकारीहरुले जनाएका छज् । अब जुनसुकै बार जुनसुकै पसल खोल्न पाइने छ । तर, यसरी खोलिने पसलहरुमा समय भने तोकिएको छ। खाद्यान्नका पसलहरु भने बिहान ६ बजेदेखि साँझ ६ बजेसम्म खुल्ने छन्। त्यस्तै अन्य पसलहरुलाई भने बिहान ११ बजेदेखि साँझ ६ बजेसम्म खुल्न दिइएको छ।
होटेल, रेष्टुरेष्टको हकमा भने टकेअवे र होम डेलिभरी सेवामात्र दिन पाउने छन्। काठमाडौ । उपत्यकाका प्रमुख जिल्ला अधिकारीको बैठकले मंगलवारवाट सार्वजनिक सवारी साधन संचालन गर्ने निर्णय गरे ।
मंगलवारवाट २५ सिटभन्दा माथिका सार्वजनिक सवारी साधन मात्र संचालन हुन्छन् । जसलाई जोरबिजोरका आधारमा चलाउन पाइन् छ । ठूला बसहरूलाई जनस्वास्थ्यका मापदण्ड अपनाएर भोलिदेखि जोरबिजोरको आधारमा चल्न दिने निर्णय भएको काठमाडौंका प्रमुख जिल्ला अधिकारी कालीप्रसाद पराजुलीले जानकारी दिए ।